Global Voices teny Malagasy » Nomad Green: Amoron-tevan’ny faharavan’ny tontolo iainana i Mongolia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Desambra 2010 6:19 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika avylavitra
Sokajy: nomad green
i Mongolia dia tany iray manana ririnina lava sy mangatsiaka be, lohataona migaingaina sy haintany mandindona. Isan'ny olana ara-tontolo iainana atrehiny ny firosoan'ny tany efitra, ny fahasimban'ny ala vokatry ny fitrandrahana tafahoatra, ny tsy fahampian-drano ary ny fahalotoan'ny rivotra sy ny rano. Ireo olon-tsotra mpampita vaovao ao amin'ny Nomad Green  dia miezaka manentana mikasika ny fahasimban'ny tontolo iainana ao amin'ny firenen-dry zareo amin'ny fitodihana amin'ireo vahoaka Mongoliana sy ny mpamaky avy amin'izao tontolo izao.
Hoh.Mongol dia manoratra  momba ny fifindra-monina tsy re tsaika ateraky ny tontolo iainana mitranga any amin'ny tany efitr'i Gobi any Mongolia:
Tumenbayar dia mitatitra  ny faharinganan'ny ‘antilopes’ ao Mongolia ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny firosoan'ny tany hay. Marihan'i  Badamgarav fa ny fihazàna tsy ara-dalàna dia iray amin'ny loza mitatao amin'ireo ‘antilopes’. Ny ‘antilopes saiga’ Mongoliana dia vonoina hakàna singa hanaovana fanafody sinoa.
Amin'izao fotoana, i Mongolia dia iray amin'ireo firenena 110 maneran-tany misedra ny firosoan'ny tany hay. Hazavain i  Badamgarav ny mahatonga an'i Mongolia hiboridana noho ny afitsoky ny firosoan'ny tany hay:
Nefa tena maloka tokoa ve ny hoavy? Velom-panantenana koa ireo mpikambana ao amin'ny Nomad Green momba ny fanamby atrehana. Tamir mirezaka mikasika ny làlana vaovao hiadiana amin'ny fahalotoan'ny rivotra ateraky ny setroka mivoaka avy amin'ny lafaoron'ireo tranolay. Mitanisa  ny asa famoronana nataona tanora Mongoliana injeniera iray izy, lafaoro mandeha amin'ny herinaratra ho an'ireo tranolay, izay hanafoana ny fampiasana ny solika fandrehitra ary ho azo ampiasaina koa hahandroana sakafo sy hanamainana lamba. Ny herinaratra dia mety ho azo alaina avy amin'ireo angovo azo havaozina.
i Bor dia nitafatafa  tamin'i Gombojav Jamba , filoha lefitra teo aloha tao amin'ny Great Khural of Mongolia (Avy amin'ny mpandika: Parlemanta any an-toerana) sady mpitarika ny ONG “Bogdkhan mountain’s natural complex”, izay miteny fa ny famerenana ny ala sy ny fambolena voninkazo no làlana hampihenana ny fahantràna ao Mongolia.
Vakio ny bilaogin'ny Nomad Green  (amin'ny tenim-pirenena enina) raha te-hahalala bebe kokoa momba ny zava-misy ara-tontolo iainana any Mongolia.
Tumenbayar rapporte  comment les antilopes de Mongolie sont en danger d'extinction à cause de la dégradation de l'environnement et de la désertification. Badamgarav fait remarquer  que la chasse illégale est l'une des menaces qui pèsent sur les antilopes. Les antilopes saïga de Mongolie sont tuées pour fournir des ingrédients de remèdes chinois
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/12/30/11570/
 dia manoratra: http://en.nomadgreen.org/archives/2010/11/24/10778/
 dia mitatitra: http://en.nomadgreen.org/archives/2010/10/31/10358/
 Hazavain i: http://en.nomadgreen.org/archives/2010/11/05/10401/